Manamafy ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka Giazana avy hatrany ireo posy sy sarety mandika lalàna
Nanamafy ny avy ao amin’ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka fa mandray andraikitra feno momba ireo posy sy sarety entin-tanana tsy manara-dalàna ny polisim-pirenena.
Giazana avy hatrany ireto posy sy sarety tratra mandeha eny an-dalambe amin’ny ora tsy tokony handehanany. Amin’ny 10 ora maraina ka hatramin’ny 12 ora atoandro sy amin’ny 2 ora ka hatramin’ny 4 ora tolakandro moa no ora hahafahan’izy ireo mifamezivezy eto Antananarivo Renivohitra, izany hoe tsy tokony hisy posy sy sarety hita eny amin’ny arabe amin’ny 7 ora na amin’ny 9 ora maraina. Nitsotra kosa anefa Atoa Ainanirina Estel talen’ny kabinetran’ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka fa somary manahirana ny mandamina ireo posy sy sarety maro be izay miantso etsy amin’ny tsenan’Anosibe. Nomarihany fa ny polisim-pirenena no voalohany nanaitra ny tompon’andraikitra rehetra mba handamina sy hampanaja ny lalàna momba ny fifamezivezen’ny posy sy sarety eto an-drenivohitra ary mitohy mandray andraikitra ireo polisy mandrindra ny fifamoivoizana. Izay ny fanambarana ofisialy fa amin’ny tena izy dia misy ny polisy tena mitazam-potsiny posy sy sarety mandeha eny amin’ny arabe amin’ny ora tsy tokony hadehany eny.